Gini mere anyi ji achọ aṅuri ?
Tupu anyi chọpụta inweta Aṅuri na-adịgide adịgide, i nwetugo mgbe i na- eche banyere ihe mere anyi ji chọọ inwe aṅuri? Aziza di mfe ga-abụ, “Aṅuri n’enye obi ụtọ”
Ezigbo ihe kpatara ya bụ na n’ime ime anyi bụ mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi bụ Chineke n’ime anyi, otu ihe agwa Chineke bụ aṅuri kachasi elu. Aṅuri a bụ obi ụtọ nke kachesi elu nke na-adighi ihe ọbụla ọzọ ọ dabere. N’ụzọ dị mkpirisi, anyi maara na ụdị aṅuri kachasi elu di, ma na ọ na-esiri anyi ike ichọta ọnọdụ nke aṅuri kachasi elu.
Ma anyi na- eme otu nnukwu ihe na-adighi mma. Anyi na- achọ aṅuri a n’ezi onwe anyi kama ịchọ ya bụ nnukwu aṅuri n’ime anyi.
N’otu oge mmadụ kwụrụ na ọchi, “Ọ bụ ihe jọgbụrụ onwe ya na Chineke kere anyi mee ka anya anyi che ihu na mpụta ebe anyi ga-achọta aṅuri ebebe nanị ma ọ bụrụ n’ anyi ga n’ime.”
Ọ bụ ya mere anyi ga-eji maa jijiji, n’ụzọ nkiti, maa n’ọnya site n’ihe ọbụla anyi hụrụ n’ezi ụwa.